नेप्से झण्डै चार अंकले घट्यो, सामुहिक लगानी कोष बाहेक सबै समुहले गुमाए
२o७६ असोज ६ सोमबार / Monday, September 23, 2019
२o७६ भदौ २५ बुधबार
काठमाडौ । साताको चौथो कारोवार दिन बुधबार पनि नेप्से घटेको छ ।
नेप्से आज तीन दसमलव ४६ अंकले घटेर ११ सय ६३ दसमलव ३१ बिन्दुमा झर्दा सेन्सिटिभ पनि शुन्य दसमलव ७९ अंकले घटेर दुई सय ५४ दसमलव ७८ बिन्दुमा झरेको छ ।
एक सय ७१ कम्पनीहरुको पाँच हजार चार सय ३० वटा कारोवारमा १५ लाख तीन हजार नौ सय २८ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएकाछन । उक्त परिमाणमा सेयर खरिद बिक्री हुंदा कारोवार रकम ३४ करोड १७ लाख ४५ हजार एक सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेप्सेमा आज १२ वटा समुहको कारोवार भएकोमा सामुहिक लगानी कोष समुहको सुचक शुन्य सामान्य अंकले बढेपनि बाँकी समुहको सुचक उच्च घटेकाछन । सो मध्ये बाँणिज्य बैक समुहको सुचक एक दसमलव ७५ अंकले घटेर एक हजार ६८ दसमलव ९७ बिन्दुमा झर्दा बिकास बैंक समुहको सुचक पनि ३४ दसमलव ८४ अंकले घटेर १८ सय ९९ दसमलव १२ बिन्दुमा झरेको छ ।
जलबिद्युत समुहको सुचक पनि दुई दसमलव ५९ अंकले घटेर नौ सय ६४ दसमलव ८८ बिन्दुमा झर्दा निर्जिवन बीमा समुहको सुचक पनि ४९ दसमलव तीन अंकले घटेर चार हजार चार सय ४१ दसमलव ५६ बिन्दुमा झरेको छ । लघुबित्त, जीवन बीमा, ट्रेडिङ, होटल, फाईनान्स, उत्पादनमुलक र अन्य समुहको सुचक पनि घटेकाछन ।
आज बढी कमाउने कम्पनीको सुचीमा पहिलो स्थानमा परेको घलेम्दी हाईड्रो पावर कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मुल्य चार रुपैयाँ ४१ पैसाले बढेर ७१ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ भने बढी गुमाउने कम्पनीको सुचीमा पहिलो स्थानमा परेको नविल इक्विटी फण्डको प्रतियुनिट सेयर मुल्य छ रुपैयाँ ६९ पैसाले घटेर सात रुपैयाँ ५३ पैसामा कारोवार भएको छ ।
यसैगरी बढी रकम कारोवारका आधारमा पहिलो स्थानमा परेको सोल्टी होटल लिमिटेडको प्रतिकित्ता दुई सय १९ रुपैयाँ अन्तिम मुल्यमा चार करोड ५५ लाख ५१ हजार छ सय ५२ रुपैयाँको कारोवार भएको छ ।
नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, अन्य बाहेक सबै समुहको सुचक रातै
काठमाडौ । साताको पहिलो कारोवार दिन आज आईतबार नै नेप्सेमा दोहोरो अंकले गिरावट आएको छ । नेप्से आज १६ दसमलव पाँच अंकले घटेर ११ सय ३९ दसमलव २५ बिन्दुमा झर्दा सेन्सिटिभ
साताको सेयर : नेप्से ११ सय ५५ अंकमा, एक अर्ब ८९ करोड २७ लाखको कारोबार
काठमाडौ । यो साता सेयर कारोवार रकम गत साताको तुलनामा बढेको छ । यो साता एक सय ७२ कम्पनीहरुको ३७ हजार तीन सय २७ वटा कारोवारमा ६५ लाख ८७ हजार २द्द
एससीटीमा नयाँ व्यवस्थापन, युनियन पेको सहकार्यमा नयाँ कार्ड सार्वजनिक
काठमाडौं । स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजी लिमिटेड(एससीटी)को व्यवस्थापन प्रभु समुह, आइएमई र हिमालयन बैंकले लिएपछि नयाँ कार्ड सार्वजनिक गरेको छ । पुरानो व्यवस्थापन समस्यामा परेपछि एससीटीको स्थान भिसा कार्डले लिएकोमा अहिले नयाँ
नेप्सेमा फेरि पुरानै लयमा, १८ अंकले घट्दा ३९ करोडको कारोबार
काठमाडौं । नेप्से फेरि पुरानै लयमा फर्किएको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से पुुनः उच्च अंकले घटेको छ । अघिल्लो दुुई दिन बढेको नेप्से आज १८ दशमलव १२
लिभरपुलको विजयीयात्रा जारी, चेल्सीमाथि शानदार जित
बेन्जमाको निर्णायक गोलमा रियल म्याड्रिड विजयी
भारतलाई पराजित गर्दै दक्षिण अफ्रीकाले गर्यो सिरिज बराबरी
नेइमारको अर्को निर्णायक गोलमा पिएसजीको जित
वेस्टह्यामसँग हार्यो म्यानचेस्टर युनाइटेड
मेसीले कसरी सोच्छन् मलाई थाहा छ, बार्सिलोनाको कोच बन्न सक्छु - जाभी
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी
भेरी नदीमा दाउरा निकाल्दा बगेर मृत्यु
चन्द्रबहादुर गुरुङस्मृति कप फुटसल शुरु
काठमाडौँ उपत्यकामा दुई दिन बिराएर पानी वितरण हुने
सिपिएलमा बार्बाडोसको अर्को जित, सन्दीपको उत्कृष्ट बलिङ
सिटी एक्सप्रेसको 'लखपति एक्सप्रेस २०७६-न यति न उति सिधै लखपति' योजना सार्वजनिक
च्याम्पियन्स लिगमा नेइमारको प्रतिबन्ध घट्यो
इपिएलको प्रत्यक्ष प्रसारण डिस्कभरी नेटवर्कको ‘डी-स्पोर्ट्स’ बाट हुने
टेस्ट च्याम्पियन्सिपमा अहिलेसम्म कसको कति अंक ?
यस बर्षको पृथ्वी प्रज्ञा–पुरस्कार सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरिने
काभ्रेमा आकस्मिक अवतरण गरेका हेलिकप्टर आठ घण्टापछि उडे
अस्पताल आफै विरामी : कसले गर्छ उपचार ?
बार्सिलोनाले फातीको रुपमा पायो नयाँ मेसी, स्पेनबाट खेल्ने तयारी